Malagasy Dictionary and Madagascar Encyclopedia : /bins/ohabolana/adala.mg.aj
Proverb 7 Adaladala nahazo vorona : ny volom- bodiny no nongotany , fa tsy ny elany , koa lasa izy. [Nicol 1935 #248, Cousins 1871]
Adala nahazo vorona : ny volom- bodiny no nongotany , fa tsy ny elany , koa lasa izy. [Veyrières 1913 #2054]
Proverb 9 Adala hianao, raha anarina tsy zaka . [Veyrières 1913 #6466]
Proverb 10 Adala izay mandany miohatra noho ny miditra. [Veyrières 1913]
Proverb 11 Adala misikidy an-tranon- -drafy , ka ny hafenina no nasehony . [Veyrières 1913 #2053]
Toy ilay adala nisikidy an-tranon- -drafy , ka ny afenina no aseho aloha. [Rinara 1974]
Toy ny adala misikidy an-tranon- -drafy : ny kilema miafina ka asehoseho . [Veyrières 1913 #2118, Cousins 1871]
Proverb 12 Adalan-kaotra ka zary hazaka . [Veyrières 1913]
Adalan-katina , ka zary hazaka . [Houlder 1895 #1992, Cousins 1871 #7, Veyrières 1913]
Proverb 13 Adala nomen- tanan' ondry : na hosoloana hofany aza tsy mety . [Rajemisa 1985 #21]
Zaza nomen- tanan' ondry ka na soloana hofany aza tsy mety . [Rinara 1974]
Zaza nomen- tanan’ ondry : raha soloan- -kofany aza tsy mety . [Veyrières 1913 #1553, Cousins 1871 #3780]
Proverb 14 Adala toa zokim- -bomanga : ny lehibe indray no hosenan- -davenona . [Veyrières 1913 #2055, Cousins 1871 #1]
Adala toa zokim- -bomanga : ny lehibe indray no milatsaka ao am--patana . [Veyrières 1913 #2055]
Adala toy ny zokim--bomanga , ka ny lehibe indray no hosenan- -davenona . [Houlder 1895 #1629]
Zokim- -bomanga , ka ny lehibe indray no milatsaka am--patana . [Rinara 1974 #5104]
Zokim- -bomanga : ny lehibe indray no milatsaka am--patana . [Cousins 1871 #3787]
Proverb 15 Adala vady reny anaka ka mirakitra amin-karon-doa-body . [Rajemisa 1985 #21]
Adala vady reny anaka , ka mirakitra an-karon-doa-body . [Veyrières 1913 #1252, Cousins 1871 #2]
Aza mirakitra an-karon-doa-body . [Houlder 1895 #788, Veyrières 1913 #2354, Rinara 1974 #784, Cousins 1871 #630, Nicol 1935 #216]
Proverb 17 Ady amin' adala , ka ny handry no miala. [Houlder 1895]
Ady amin’ adala : ny manam-panahy ihany no mandefitra . [Cousins 1871]
Ady amin’ adala : ny manam-panahy no mandefitra . [Rajemisa 1985 #21]
Proverb 177 Akory ity adala miara-monina amin-kendry ! [Veyrières 1913 #2058, Houlder 1895]
Akory ity adala miara-monina amin' ny hendry . [Rinara 1974 #93]
Proverb 201 Aleo adala tena toy izay adala reny anaka . [Houlder 1895]
Aleo adala tena , toy izay adala vady reny anaka . [Veyrières 1913 #2059]
Proverb 211 Aleo homam- -boatavo mahamay sa aleo adala havana ? [Veyrières 1913 #1050]
Proverb 216 Aleo lahy adala zanaka lahimatoa toy izay adala loholona . [Veyrières 1913 #275]
Proverb 494 Andry ombin' Ifiringa adala , ka ny aloha voatora-tandroka , ary ny aoriana voafola-drambo . [Houlder 1895]
Andry ombin' Ifiringa adala , ny aloha voatoran-tandroka , ny aoriana voafola-drambo . [Rinara 1974]
Proverb 684 Atao adala ka tezitra : vary misy ro ka haronina , sisan' Idalo ka hanina . [Rajemisa 1985]
Atao adala ka tezitra : vary misy ro ka haronina , sisan' ny Idalo ka hanina. [Houlder 1895 #1652]
Atao adala ka tezitra , vary misy ro ka haronina , tanan-tsy mioza ka enti-mitsabaka . [Cousins 1871 #291]
Atao ho adala ka tezitra , nefa vary misy ro ka haronina , sisan' Idalo ka hanina . [Veyrières 1913 #2060]
Atao ho adala ka tezitra , nefa vary misy ro ka haronina , tanan-tsy mioza ka enti-mitsabaka . [Veyrières 1913 #2060]
Proverb 743 Atodiakohon-dRenifiankinana : nakotri-behivavy , noraisin-dehilahy , ka alao fa adala tompo . [Veyrières 1913 #753, Houlder 1895]
Aza atao atodiakohon-dRenifiankinana , nakotri-behivavy , noraisin-dehilahy . [Rinara 1974 #30]
French translation Les œufs de poule de Renifiankinana: une femme (celle que l' on vient de nommer) les a mis couver, un homme s' en est emparé, donc prenez-les, car leur propriétaire est imbécile. [Houlder 1895]
Proverb 799 Aza atao andry ombin' ilay adala , ka ny aloha voatora-tandroka , ary ny aoriana voafola-drambo ; fa ataovy andry ombin' ilay mora , ka ny aloha voakahankahana , ny aoriana voasafosafo . [Veyrières 1913]
Aza atao andri-ombin’ ilay adala, ka ny aloha voa-tora-tandroka , ary ny aoriana voahavokavoka ; fa ataovy andry ombin’ ilay mora , ka ny aloha voakahankahana , ny aoriana voasafosafo . [Cousins 1871 #336, Veyrières 1913]
Proverb 848 Aza atao taria azon' adala . [Rinara 1974 #416, Cousins 1871 #366, Houlder 1895]
Aza taria azon' adala , ka resahina isak' izay mihetsika . [Rinara 1974 #811]
Manao taria azon' adala . [Veyrières 1913 #2086]
Manao teny azon' adala . [Veyrières 1913 #2086]
Proverb 921 Aza mamoky ny adala . [Veyrières 1913 #2065]
Proverb 1094 Aza manao mpamosavy loholona mody adala . [Veyrières 1913 #4911]
Proverb 1139 Aza manao tafasirin' ny mpantsaka , ka ny lasa ihany no averimberina . [Cousins 1871]
Aza manao tafasirin' ny mpantsaka : ny teo ihany no averimberina . [Rinara 1974]
Tafasirin' adala , ka ny lasa ihany no averimberina . [Houlder 1895 #1631, Rinara 1974 #3963]
Tafasirin' adala : ny lasa ihany no averimberina . [Veyrières 1913 #2112, Cousins 1871]
Tafasirin' ny mpantsaka : ny lasa ihany no averimberina . [Veyrières 1913 #2112, Cousins 1871]
Proverb 1216 Aza manao vorona azon' adala ; ka na tsy maty aza, mifohafoha volo. [Houlder 1895 #436]
Vorona azon' adala , ka raha tsy maty aza, mararirary . [Veyrières 1913 #2126]
Vorona azon' adala , ka raha tsy maty aza, mifohafoha volo . [Veyrières 1913 #2126]
Vorona azon' adala : raha tsy maty aza mifohafoha volo . [Rajemisa 1985]
Vorona azon' ankizy : raha tsy maty aza, mifohafoha volo . [Veyrières 1913 #1548]
Proverb 1301 Aza manome fo ny adala . [Veyrières 1913 #349]
Proverb 1656 Be tsy adala hoatry ny amboan' Avaradrano . [Veyrières 1913 #2075]
Proverb 1670 Bibilava nitera-pahafito , ka izay adala no toa an-drainy . [Rinara 1974]
Proverb 2037 Farihy maty mamba ka irobohan' ny adala rehetra. [Rinara 1974 #1125]
Farihy maty mamba , ka itsobohan’ ny adala rehetra. [Cousins 1871 #938]
Proverb 2238 Hay adala manenjika adala , ka ifanenjehana koa avy eo. [Rinara 1974 #1290]
Proverb 2357 Hendry miady amin’ adala : havazinana no hita. [Cousins 1871 #1050]
Hendry miady amin' adala , ka havizanana no hita. [Houlder 1895 #331]
Miady amin' andevo , ka havizanana no hita. [Houlder 1895 #1555]
Miady amin' ny adala , ka havizanana no hita. [Abinal 1888]
French translation Celui qui se dispute avec un imbécile, ne trouve que la honte et le déshoneur. [Abinal 1888]
Proverb 2497 Ibado adala , asai-mitampody vao mody mandry . [Rinara 1974 #1390]
Ibado adala : asaina mitampody izy vao mody mandry . [Houlder 1895]
Proverb 2498 Ibango aza adala : izay manendry azy dia tendreny . [Houlder 1895]
Ibango aza adala , izay manendry azy mba tendreny . [Veyrières 1913 #2034, Cousins 1871 #1105]
Proverb 2516 Ilay kamo mivady : ny lahy matory maraina , ny vavy manao be fahandro , ka tafaray samy adala . [Rinara 1974 #1400]
Ilay kamo mivady : ny lahy matory maraina , ny vavy manao be fahandro : tafahaona ny adala roa. [Cousins 1871 #1114, Veyrières 1913]
Proverb 2519 Ilay manafina ala fady , ka fosain' ny bodo sy adala . [Rinara 1974 #1407]
Proverb 2633 Izay adala no toa an-drainy . [Rinara 1974]
Izay adala no toa an-drainy aman-dreniny . [Veyrières 1913 #2079]
Izay adala no toa an-dreniny . [Rinara 1974]
Proverb 2649 Izay hendry no Rangahy , fa ny adala , Ilailoza . [Rinara 1974 #1485]
Proverb 2709 Izay tia , resy ; izay manina , adala . [Veyrières 1913]
Ny tia , resy ; ny manim-boafady . [Rinara 1974 #3298, Veyrières 1913, Rajemisa 1985]
Proverb 3239 Mahadidy maso mpanandro ary manoto azy milaza , fa mamitaka ny adala , ka aza manandro foana . [Veyrières 1913 #127]
Proverb 3459 Manafatra ny hendry : ny anao tsy misy amelany, ary ny azy hanampy ny anao ; manafatra ny adala : ny anao amelany, ary ny azy tsy ataony . [Veyrières 1913 #3404]
Proverb 3491 Manana ny adala mahatezi-tarehy . [Houlder 1895 #1642]
Ny adala mahatezi-tarehy . [Veyrières 1913 #2097]
Proverb 3496 Manandrify hoatry ny tenin' adala . [Veyrières 1913 #4765]
Manandrifindrify ohatra ny tenin' adala . [Houlder 1895]
Proverb 3652 Manasa ny be kibo , ka ny vary no lany ; mananatra ny adala , ka ny vava no vizana . [Houlder 1895 #1595, Veyrières 1913 #6474, Rinara 1974 #137]
Proverb 4028 Miady amin' ny vazina ka vazina koa, miady amin' adala ka sahala ihany. [Rinara 1974 #2231]
Proverb 4524 Mizara be mahahendry , mizara kely maha-adala (ahazoana tsiny ). [Rinara 1974 #2531]
Mizara be mahahendry , mizara kely mahadala , mandidy taolana mahadombo antsy . [Houlder 1895 #1621, Veyrières 1913 #3207]
Proverb 4535 Mody adala, ohatra ny jiolahy homana anana. [Cousins 1871]
Mody adala ohatra ny jiolahy homan' anana . [Rinara 1974]
Proverb 4677 Na adala aza ny manina , dia ny tompom-bady ve no hafarana ? [Rinara 1974 #2640]
Proverb 4788 Nananatra an' Andriamatoa adala , ka Ifaralahy no nandatsaka am-po. [Rinara 1974 #2740]
Nananatra an' Andriamatoa adala , ka Rafaralahy no mandatsaka am-po. [Veyrières 1913 #6480]
Proverb 4839 Ny adala no manitsa--Bazimba , ka ny lehibe no aolanolany . [Houlder 1895 #61, Veyrières 1913 #2098, Rinara 1974 #183]
Proverb 4841 Ny adala tsy mahalala ny tsy misy, fa ny hamoronana ihany no fantany. [Houlder 1895 #1641]
Proverb 4842 Ny adala tsy mahalala tsy misy no sady tsy mahay mantorona rahateo. [Rinara 1974 #185]
Proverb 4843 Ny adala tsy misy, fa ny ondranondranana no be. [Veyrières 1913 #2043, Cousins 1871 #2121]
Ny adala tsy misy fa ny ondranondranana no betsaka . [Rinara 1974 #2820]
Proverb 4917 Ny anaran' alika no miarak' adala ; fa ny olona tsy tokony hiarak' adala . [Houlder 1895 #1625, Veyrières 1913 #2100]
Ny anaran' alika no misy miarak' adala, ka tsy tokony hiaraka adala . [Rinara 1974 #2870]
Proverb 5144 Ny handry mody voky , fa ny adala homana ihany. [Houlder 1895]
Proverb 5372 Ny mioty manta no leony, ny tsy mahandry masaka no adala . [Rinara 1974 #202]
Proverb 5374 Ny mitohy fangoka adala , fa ny mandova toa hendry . [Houlder 1895 #1622, Veyrières 1913 #3181, Rinara 1974 #3152]
Proverb 5430 Ny omby jamba , ny tevan-dalina , ny mpandroaka adala , ka any an-kady no farany . [Rinara 1974 #3191]
Proverb 5477 Ny ravaka tsy manendrika ny adala . [Veyrières 1913 #2453]
Proverb 5542 Ny taolana mahajamba ny alika , ny hena mahajamba ny adala , ny vola mahajamba ny hendry . [Veyrières 1913 #2229]
Proverb 5576 Ny teny ratsy moramorain' ny adala , fa sarotsarotin' ny hendry . [Rinara 1974 #3284, Cousins 1871 #2447]
Proverb 5588 Ny tery toa adala ary ny malalaka toa hendry . [Rinara 1974 #3296]
Proverb 5663 Ny tsora-kazo dia efa voatokana rahateo ho amin' ny lamosin' ny adala . [Veyrières 1913 #2105]
Proverb 5713 Ny voa tsy hendry , ny azony adala . [Veyrières 1913 #2045, Cousins 1871 #2482]
Proverb 5732 Ny voninahitra tsy mendriky ny adala . [Veyrières 1913 #2107]
Proverb 5745 Ny zaza hendry mahafaly ny rainy, ny zaza adala mampahory ny reniny. [Veyrières 1913 #990]
Proverb 6002 Raha adala loholona , adala vahoaka , raha hendry loholona , hendry vahoaka . [Rinara 1974 #3543]
Raha adala loholona , dia adala vahoaka . [Houlder 1895 #1638]
Raha adala loholona , dia adala vahoaka an-tanana. [Cousins 1871 #2633, Nicol 1935 #277]
Raha adala loholona , dia adala vahoaka an-tanàna ; raha hendry loholona , dia hendry vahoaka an-tanàna . [Veyrières 1913]
Raha hendry loholona , dia handry vahoaka . [Houlder 1895]
Raha hendry loholona , dia hendry vahoaka an-tanana. [Cousins 1871 #2652]
Proverb 6061 Raha longo adala , izaho mba basy . [Cousins 1871, Rinara 1974]
Proverb 6086 Raha mananatra ny adala , aleony matory toy izay mba hihaino ; ary raha mananatra ny hendry , ny ao an-tsaina be, ny an' olona alainy koa. [Veyrières 1913 #6525, Cousins 1871 #2687]
Proverb 6320 Rediredin' adala na misy azo raisina aza mivaona . [Rinara 1974 #3742]
Proverb 6376 Sabakaka miaraka aman-tsahona , ka ny lehibe no adala. [Cousins 1871 #2811]
Saobakaka miaraka aman-tsahona ka ny lehibe indray no adala . [Rinara 1974 #3836]
Saobakaka miaraka aman-tsahona , ny lehibe no adala . [Veyrières 1913 #678]
Toy ny saobakaka miaraka aman-tsahona , ka ny lehibe no adala . [Houlder 1895]
Proverb 6499 Sampin-kavia mahavery ny adala , saina tsy mionona mahalany harena . [Rinara 1974 #3825]
Proverb 6692 Soron' afon' adala , ka ny aloha tsy lany ka ny ato aoriana asesika ihany. [Rinara 1974 #3954]
Soron' afon' Ikala adala : ny aloha tsy levona , ny ato aoriana asesika ihany. [Veyrières 1913 #2111]
Toy ny soron' afon' adala : ny aloha tsy levona , ny aoriana asesika ihany. [Houlder 1895 #1649, Cousins 1871]
Toy ny soron' afon' adala : ny eo aloha tsy levona , ny ato aoriana asesika hameno fatana . [Rinara 1974 #4325]
Proverb 6822 Tanan' aolo tsy ilaozam-pandrotrarana ; hadivory tsy ilaozan' ambiaty ; teny maro tsy ilaozan' izay ota. [Veyrières 1913 #4823, Houlder 1895]
Tanàna haolo , tsy ilaozam-pandrotrarana , hadivory tsy ilaozan' ambiaty , teny maro tsy ilaozan-diso . [Rinara 1974]
Tendrombohitra tsy ilaozan' ambiaty , tanàna maro tsy ilaozan' adala , kabary be tsy ilaozan-diso . [Cousins 1871 #3072, Rajemisa 1985]
Proverb 6867 Tanàna tsy ilaozan' adala . [Rajemisa 1985]
Proverb 6895 Tantele afa-dimboke ka ilirañi ty adala . [Poirot & Santio: Vezo]
Tantele afa-dimboke ka ilirañi ty adala iaby . [Poirot & Santio: Vezo]
Proverb 6897 Tantely afa-drakotra , ka anjakan' ny adala . [Veyrières 1913 #684]
Tantely afa-drakotra ka anjakan' ny bodo sy adala . [Rinara 1974 #4075, Rajemisa 1985]
Tantely vaky sarona, ka anjakan' ny lalitra . [Rinara 1974 #4104]
Proverb 6902 Tantely notsabahim-boka ka tsy tia mbamin' ny adala . [Veyrières 1913 #2024]
Proverb 7098 Toy ny adala manihika : atao ambany, mitondra fotaka; atao ambony, mitondra volon-drano . [Houlder 1895]
Toy ny fanihik' adala : atao ambany, mitondra fotaka ; ambony, mitondra volon-drano . [Veyrières 1913 #2119]
Proverb 7110 Toy ny amboakely voakapoka ny adala , ka mitondra teny mivoaka . [Rinara 1974 #4256]
Proverb 7369 Tratrarin' ny soa vao miendrika adala , ambinina vao manary harena . [Rinara 1974 #4391]
Proverb 7414 Tsy adala monina Ankaratra aho ka tsy hahalala sahondra ho vaky . [Rinara 1974, Rajemisa 1985]
Tsy adala monina Ankaratra , ka tsy hahalala sahondra ho vaky . [Veyrières 1913 #2046, Cousins 1871 #3333]
Proverb 7725 Tsy misy adala tahaka ny kiaoa ; nefa nony mivoaka , manao tondro-molotra . [Cousins 1871 #3507]
Tsy misy adala tahaka ny kisoa , nefa nony mivoaka manao tondro-molotra . [Rinara 1974 #4700]
Tsy misy adala tahaky ny kisoa ; nefa nony mivoaka , manao tondro molotra . [Veyrières 1913 #598]